Iindiza ezisuka eBudapest zisiya eAthene, eCopenhagen, eLisbon, eMadrid kunye nezinye kwiRyanair
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezisuka eBudapest zisiya eAthene, eCopenhagen, eLisbon, eMadrid kunye nezinye kwiRyanair
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • IHungary Iindaba eziPhulayo • Iindaba eziQhelekileyo zaseIreland • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • IPortugal Breaking News • ISpain Iindaba Eziphambili • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
I-Irish enexabiso eliphantsi-eliphantsi-eliphinda liphinde liphinde lenze iinqwelomoya ukuya kwiindawo ezili-16 zaseYurophu ezisuka kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest.
I-Ryanair ibuyisela amakhonkco abaluleke ngakumbi kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest
Iindawo ezivuselelweyo ziyiAthene, iBristol, iCagliari, iCatania, iCopenhagen, i-Edinburgh, iLisbon, iMadrid, iMarseille, iMykonos, iNapoli, iPalermo, iPaphos, iPorto, iSevilla kunye neValencia
IRyanair izakusebenza kumatyeli angama-35 ngeveki kwiindlela ezili-16 ngoJuni
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest siphawula ukubuya konxibelelwano olubaluleke ngakumbi kunye neRyanair kule veki, njengoko umphathi wexabiso eliphantsi-wexabiso eliphantsi (ULCC) evula iinqwelomoya ukuya kwiindawo ezili-16: eAthene, eBristol, eCagliari, eCatania, eCopenhagen, e-Edinburgh, eLisbon, eMadrid, eMarseille, IMykonos, iNapoli, iPalermo, iPaphos, iPorto, iSevilla neValencia.
Ryanair izakusebenza ii-frequency zeeveki ezingama-35 kwiindlela ezili-16 ngoJuni, inyuka iye kwi-47 yokusebenza ngeveki ngoJulayi nango-Agasti. Oku kuthetha ukuba zizonke izihlalo zeveki ezingama-6,615 ngoJuni kunye ne-8,883 ngoJulayi nango-Agasti.
“Kumnandi ukwamkela ukubuya kwezi nkonzo zibalulekileyo zaseRyanair. Ngezi ndlela, i-ULCC iphinda iqalise unxibelelwano namanye amazwe asibhozo, amahlanu kuwo angakwiidolophu ezinkulu, ezenza ukuba zibe zezona zilungele abahambi kunye nezolonwabo ngokufanayo, ”ucacisa uBalázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, Isikhululo senqwelomoya saseBudapest.
“Inani labemi baseHungary abagonyiweyo lelona liphezulu eYurophu. Kuyasivuyisa ke ngoko ukuba amakhonkco amaninzi aqaliswa kwakhona kuthungelwano lwethu, kunye neendlela ezintsha ezisungulwayo, zinika unxibelelwano oluphuculweyo kunye nokunceda abakhweli bethu, ngelixa kwangaxeshanye kukhulisa urhwebo nokhenketho. ”
IRyanair DAC yinkampani yeenqwelo moya yaseIreland enexabiso eliphantsi eyasekwa ngonyaka ka1984. Ikomkhulu layo likwiKrele, eDublin, kunye neziseko zayo zokusebenza eDublin naseLondon eStansted. Yenza eyona nxalenye inkulu yosapho lweenqwelo moya zeRyanair Holdings, kwaye ineRyanair UK, Buzz, neMalta Air njengeenqwelo moya zodade.
IHard Rock Ihotele kunye neCasino iAtlantic City isungula iHard Rock Air
I-Alaska Airlines ukuphinda iphinde ishedyuli epheleleyo ePaine Field ngentwasahlobo yowama-2022